MaZambians Kutapira!!! – VanodaZvinhu
by DrSviro · October 17, 2013
MAZAMBIAN KUNAVEDU IMU. ANOIITA KUTI TAPI TAPI TAPI TAPI
Pandakadaira phone yangu ndakanyatsonzwa kuti iri voice neka ascend aka hakasi kumu Zimbabwean chaiye. Ndakabva ndangoti auye pabasa pangu and nenguva isipi akangoti godi kusvika pagedhi nekano kaSubaru b4. Mwana anga akabatana iyeye veduwe.
Zvangu zvino zvekujaidza mboro izvozvi yanga yotobhubha zvayo irimo mubhurugwa pandakangomuti baaa Quinin. Iyewo akazviona kuti uuuuuuu mboro yandiri kungonzwa nezvayo iyi inenge iripo zveshuwa. Akabva angoti “get into the car”. Ndichipinda so ndaona mwana wevanhu achisekerera achiisa ruonko pachiuno changu achirudzosa so ndikaziva kuti eeeeee otoda zvemboro mwana uyu. Ndakabva ndamurega zvangu achipinza mubhurngwa mangu karuoko kake kasoft touch chaiko.
Abva asangana naro rino ZISHONDO ranga rangova mupini kumira. Paariti vhovhonyoro kubva mubhurungwa ndoopaabva angozvitundira hake mwana wevanhu ndobva aita weak. Takatenderana kuti tiende kulodge yekuWaterfalls Parktown pakona paMilford na 3rd street ndokubhuka room yedu ndobva taipiwa. Uuuuuuu vakomana nevasikana maZambian ane muraba raba wematinji kwete zvedu zvatajaira muno izvi. Apa zvuma chiuno chinenge chakati cheeeeeeeeee kuzara nazvo. Hino vaZishondo vaisaziva kuti zvinoshandei zvuma zvacho.
Ndakaita zvangu zvandajaira ndokutanga netumakisi, mazamo achibatwa baba, apa kabinzi kachitambwa nako nerumwe ruoko pamwe chete nekutamba neano mazitinjiiii. Takanhafana for 7 minutes but uuuuuuu ndakazopedzisaira ndatenda kuti hooooo ishuwa nhai kuti maZambian haatote beche zvemanga manga nokuti BECHE rakaramba rakaoma kuti ngiiiiiiiiii serakasasikwa pamoto. Ndakabva ndapfeka condomu rangu ndokubva ndaenda pamusoro pake ndokutanga kupinza zishondo rangu. Ndatanga kupindza mbichana mbichana kusvika mboro yava half way. Apa ndopandaona mwana achizvongonyoka, achisekerera, achichema nechekure kure, tumusodzi tuchierera, ndikabva ndaziva kuti uuuuu mboro shuwa iri kunakira mwana wevanhu kunyange ichirwadzirira zvayo.
Ndabva ndatanga kumusvira zvishoma zvishoma for 9 minutes ndopandazooona shasha yozhadabura makumbo ayo ndikaziva kuti mboro iya yavakudiwa yose mukati zvino bkz beche ranga rati toterere. Vakomana maZambian akapenga pachikapa apa. Ndaiva pamusoro pake but zvandakaitwa so vehama imu zvanga zvakaoma . ndakanzwa mabonzo angu emusana achirira ndikaziva kuti uuuuu ndichatyoka manje mwana achiiita kupepeta seanopenga kudaro. Mwana akoira akakoira ndokukoira zvake for 17 minutes ndiri pamusoro and apa padoko doko ndatunda bkz uuuu mwana ainaka uye makoiriro ake aitekenyedza mboro yangu toooo bad.
Tazochinjana iye ndokuuuya pamusoro pangu apa fungwa dzangu dzose dzabva mumusoro dzikadzika pamboro. Speed yanga yokoirwa nayo apa ndooyandityora muviri wese 3000km/second. Aiita kunge rutsanga ruri mumvura inoerera zvine samba. Aiti kakakakakakakaka kuri kukoira shamwariiiiiiiiiii. Pasina kana 12 ndabva ndatunda. Kudurura ponda yemaronyo baba. Uuuuuu maronyo atadza kukwana mukondomu bkz pandabviisa condomu so ndaona mamwe aramba achingobuda.
Mboro haina zvayo kurara nokuti ndatunda. Yaramba yakati twiiiii kumira. Ndabva ndachinja kondomu ndokuidzosera iye ari pamusoro. Mwana akapenga uyu and aitoda zvokutosiya mboro yangu yasvuuka chete uye ndisisna kana chinhu chinonzi sperm mandiri ini. Aikoira achiita zvokuti mboro yainzi nyaaaaa yose mubeche ka1 yobva yanzi yose panze zvomo. Yose nyaaaaa yonzi vhomo panze yose yonzi nyaaaaaaa zvokut ndapedzisira ini ndongosura zvandisati ndamboita hupenyu hwangu hwese nekunakirwa nebeche vehama.
Mwana akoira 10 more minutes apa anga achineta zvino ini apa simba ranga rochiuya zvine power semunhu anga ambotunda. Baba mwana abva afongora zviuya zvekufongora zvekuti ndaona kunge munhu asina magaro bkz paaafongora beche rasara riri pamhene chaipo chaipo. Apa ndabva ndanyuadza mboro yose kuti hwarangada ndokutanga zvangu zviya zvekukoira sendinopenga zvemazuva ose. Ndainyudza ndichibudisawo yose panze zvokuti ndanzwa iyewo achisura achisura achisura ndikaziva nhasi zvangu achapfidza chete. Beche rake raibata mboro yangu zvokuti ndainzwa ichishyirira ichiita kunge iri kusviusvinwa mumuromo chaimo.
Ndakazonzwa mwana ogomera manje ochemerera zviya zvokutaridza kuti mboro yonyanya kunakisisa ndopandakatanga kukoira zvangu sebenzi. Ndakazoona mwana anyarara zvokuchemerera zvapera yanga yangova musodzi chete chete ndikaziva kuti zvani wani kunakirwa uku. Aaaaaa ndasvira mwana wevanhu for 18 minutes apa anga aneta kufongora ndobva ndamuti arare zvake pabed akatarisa pasi ini ndikwanise kupinza mboro mubeche nekumashure kwake akarara kudaro. Apa ndanzwa mwana otanga kuchemerera zvine power ndikaziva kuti hooooo position iyi inonaka kudai nhai. Ndazonzwa mwana anyarara ndikaziva kuti haaaaaa zvino shasha yazotunda manje. Ini ndaita sendisina chandaona zvangu ndokuramba ndichisvira mwana wevaridzi. Ndakazoti after 9 more minutes ndopandazongomanikidza kuti nditundewo . aaaa sezvinei vehama ndakatunda.
Tapedza takageza ndokumboti zororei zvedu. Tava kuenda akabva angobudisa ka$45 ndobva angoti ZIKOMO KWAMBIRI ABAMBO. Handina kuziva zvazvaireva but mari ndakatora (wenyu Zishondo Rangu Ziguru Vakomana 0715813155)
We wanna hear your story if you have one, Email drsviro@gmail.com
by DrSviro · Published October 21, 2015
by DrSviro · Published October 15, 2013
Next story Zvaitoda Uchiona Drama racho
Previous story Kusvira mukadzi waBoss. Dont try this at your workplace